Posted by Tranquillus | Feb 16, 2021 | Shabakada
Ma ogtahay in ku dhowaad kalabar dadka adduunka ku nool ay isu haystaan ​​inay yihiin laba-luuqadoodle? Jaantuskan, oo umuuqda mid layaableh jaleecada hore, ayaa hoosta laga xariiqay cilmi baarista ku saabsan laba-luqadlaha ay fulisay Ellen bialystok, khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga oo u dhashay dalka Canada isla markaana ah borofisar wax ka dhiga jaamacadda York ee magaalada Toronto.
Kadib markuu qaatay dhakhtarnimadiisa 1976, takhasuskiisuna yahay garashada iyo horumarka luqadeed ee carruurta, cilmi baaristiisa kadib waxay diirada saartay laba luuqadlaha, laga soo bilaabo caruurnimada ilaa da'da ugu horumarsan. Su'aal dhexe: laba luuqadluhu ma saamaysaa hawsha garashada? Hadday haa tahay, sidee? Kuwaani ma isku waxyeellooyin iyo / ama cawaaqibyo isku mid ah ayaa kuxiran hadday yihiin maskaxda ilmaha ama qaangaarka? Sidee carruurtu ugu noqdaan laba luqadood?
Si aad nooga dhigto cafis, waxaan ku siineynaa maqaalkan furayaal aad ku fahanto waxa ay dhab ahaantii ka dhigan tahay "noqo laba-luuqadle", maxay yihiin noocyada kala duwan ee labada luuqadle iyo, laga yaabee, inay kugu dhiirrigeliso inaad kobciso wax ku oolnimada barashada luqaddaada.
Maxay yihiin noocyada kala duwan ee labada luuqadood?
Maxay dhab ahaantii ka dhigan tahay inaad ...
Jidkaa, muxuu macnaheedu yahay “ahaanshaha laba luuqadle” runti? July 10th, 2021Tranquillus
READ Buugagta Zoho Buugga Maaraynta Maaliyadeed ee Ganacsiga
horeFoomamka Google ee Bilaashka ah: Abuur sahanno, weydiimo & su'aalo
socdaMaamulaha Suuqgeynta ee ka qalin jabiyay IFOCOP, wuxuu siiyaa dhiirigelin mashruuciisa tababarka xirfadeed